भावी पिढिले के सिकिरहेका छन् ? - Lekhapadhi विचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
भावी पिढिले के सिकिरहेका छन् ?
लेखक : लेखापढी १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०८:२५ मा प्रकाशित
भावी पिढीको अर्थ भनेको सामान्यतया आउदा पुस्ता (next genertion) भनेर भुझिन्छ । एक भाषामा भन्नुपर्दा एक पिढिबाट अर्को पिढिको आगमन हुनु हो र अगाडिका पुस्ताको रितिरिवाज, चालचलन, भाषा-धर्म, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने एक संरक्षणकर्ता भनेर पनि बुझ्न वा जान्न सकिन्छ ।
हिजोका पुस्ताले सिकाएको र हामीलाई हस्तान्तरण हुदै आएको परम्परा, संस्कार, संस्कृतिले हाम्रो जिवनमा निकै उपकारपुर्ण भुमिका खेलेको पाइन्छ।
मानिसको सृजना जङ्गली जीवनबाट विकास भएको भन्ने सुनेका र पढेका नै छौ । जङ्गलबाट मानव समाजमा प्रवेश भएका हामी मानिस एक पछि अर्को बिस्तारै बिकास भइ पुर्ण मानव समाजमा रहन आइपुगेका छौ भने एक पुस्ता पछि अर्को पुस्ता गरेर हाम्रो कयौं पुरातन संस्कार, संस्कृतिको पनि जगेर्ना गर्दै आएका छौ । हामीले हाम्रो पुस्ताका इतिहास पल्टाएर हेर्दा वा बाउ बाजेका कुरा सुन्दा केही कुरा सकारात्मक पाउछौ भने केही अलि नकारात्मक जस्तो पनि लाग्छ । हिजोका पुस्ताले सिकाएको र हामीलाई हस्तान्तरण हुदै आएको परम्परा, संस्कार, संस्कृतिले हाम्रो जीवनमा निकै उपकारपुर्ण भुमिका खेलेको पाइन्छ । जस्तै: ”हामी भलादमी हुनुपर्छ, बेलामौकामा चाडपर्वबाट मनोरञ्जन लिने, ईश्वर जिवित हुनुहुन्छ, जस्को हामीले पुजा आराधना गर्नुपर्छ, कोहि कसैलाइ दुःख दिनु हुदैन, हत्या हिंसा गर्नु पाप हो, मानिसबाट छले पनि ईश्वरले देखिरहनु हुन्छ” जस्ता सिकाइले हाम्रो समाजमा दिनदिनै घट्ने डर लाग्दा घटनाहरुबाट केही हद सम्म जोगिएको छ । बुझ्दाबुझ्दै पनि कुनै आपराधिक कार्य गर्न अघि सरे यी कुराले झस्काउने गर्दछ । किनभने हामिले हाम्रा पुस्ता बाट यी कुरा सिकेका छौ र केहि हद सम्म हाम्रो मनमा डर हुन्छ!
मानव जीवन भनेकै सिकाइ हो । हामिले जन्मेदेखि मृत्यु पर्यान्तसम्म सिकि नै रहेका हुन्छौ । केहि भुत, केहि वर्तमान र केही भबिस्यबाट दिनहु हामीले सिकिरहेका हुन्छौ तर बढी त हामिले भुतबाट नै सिक्ने गर्छौ अर्थात हाम्रा पिता-पुर्खाबाट सिक्ने गरिन्छ र सकारात्मक नकारात्मक दुबै भेट्दा हाम्रो ध्यान नकारात्मक कुरामा केहि बढि आकर्षित हुन्छ र हाम्रो मनमा विभिन्न प्रश्न उत्पन्न हुने गरेका छन्- कसरी भयो होला? किन भयो होला? कसरी हुन्छ ? जस्ता प्रश्न । हाम्रो समाजमा परम्परागत नियम वा पुरातनवादी सोच अनुसार कुनै पनि घरका छोरा वा छोरी १० बर्ष अगाडि नै बिबाह गर्नुपर्छ भन्ने चलन केही बर्ष अगाडिसम्म प्रगाढ नै थियो । त्यसमा अझ छोरीको रजस्वला नभइ बिबाह गर्दा बुवा-आमा स्वर्ग जान्छन भन्ने पनि एक किसिमको गलत सोचाई ब्याप्त थियो । महिनावारी भएकी छोरी घरभित्र बस्नु हुदैन ताकी छुनु हुदैन भन्ने चलन थियो र केही छ पनि त्यो सिकाइ र सोचाइले हामी जति परिवर्तन भएता पनि झ्वाट्ट ती कृयाकलाप परिवर्तन गर्न सक्दैनौ किनभने सहि त्यही हो भन्ने सिकाइएको थियो । बाल-बिबाह अहिले धेरै जसो सुन्न वा देख्न पाइदैन यो परिवर्तन हो तर अझै कतिपय ठाउमा भने लुकिचोरी हुनगरेको छ ।
थिएन भने किन थिएन? र थियो भने कसरी भयो भनेर हामिले हाम्रो पुर्खाको इतिहास पल्टाएर हेर्छौ त्यसै गरि हाम्रा पुस्ताले पनि हाम्रो इतिहास पल्टाएर हेर्नेछन ।
छुवाछुत प्रथालाई मानव जिवनको बिकास सङ्गै केही समय पश्चात् व्यबहारमा ल्याइयो र एकपछी अर्को पुस्तामा यो व्यबहार हस्तान्तरण हुँदै गयो, जुन ब्यबहार अझै पनि हाम्रो समाजमा हामीले देखे भोगेका छौ । अहिले आएर गलत हो भनेर बुझियता पनि ऐन कानुन बनेता पनि पुर्ण रुपमा निर्मुल भएको छैन । जस्तै: उदाहरणीय रुपमा हेर्दा- हिजो मेरो पुर्खा अर्थात अघिल्लो पुस्ताले बारिमा कमाइ लगाउनु हुन्थ्यो आज म र भोलि मेरो पुस्ताले पनि त्यही गर्नेछ । खास कुरा के हो भने हरेक कुराको सिकाइ र सोचाइमा भर पर्छ । केही काम गर्नु अगाडि पहिला यो थियो कि थिएन? थिएन भने किन थिएन? र थियो भने कसरी भयो भनेर हामिले हाम्रो पुर्खाको इतिहास पल्टाएर हेर्छौ त्यसै गरि हाम्रा पुस्ताले पनि हाम्रो इतिहास पल्टाएर हेर्नेछन । हामिले गरेको कामले चित्त बुझ्यो या सकारात्मक रहेछ भने भोलि त्यहि कुरा स्वीकार गर्नेछ ।
सामाजिक संजालमा हेर्दा राम्रा कुरा ४०% भेटिन्छन भने नराम्रा ६०% भेटिन्छन ।
अहिले देशमा घटिरहेको घटना जे सुकै होउन त्यसलाई झन् भयानक र डर लाग्दो बनाएर प्रचारप्रसार गर्ने गरिन्छ । सामाजिक संजालमा हेर्दा राम्रा कुरा ४०% भेटिन्छन भने नराम्रा ६०% भेटिन्छन । पढ्दा-पढ्दै र सोच्दा-सोच्दै हामिलाई राम्रा कुराको आलोचना गर्ने जागर पनि घट्दै जान्छ । जस्तै: एउटा बलात्कारको घटना घट्छ यो एकदमै दु:खदायी कुरा हो । कसैका लागि सह्य हुदैन तर त्यस ठाउँमा सान्त्वना भन्दा बढी डर लाग्दा न्युज प्रशारण गरिन्छन । त्यसकै बारे स्टाटस, लेख-रचना, कबिता बनाइन्छ । उक्त घटनाको सत्यता भन्दा पनि नकारात्मकताले समाजमा स्थान पाउछ र अझ अरुलाई झन् धेरै रुची बढ्ने गर्दछ ।
नकारात्मक कुरालाई भन्दा सकारात्मक पक्षलाइ मात्र उजागर गर्ने गरौ ।
दिनानुदिन समाजिक संजालमा आउने लेखहरु अध्ययन गर्दा धेरै नकारात्मक, एकले अर्काको बिरोधमा लेखिएका, छापिएका, चर्चामा आउने गर्दछन । ती कुरा पुस्तौ पुस्तामा हुनेगर्छ अनि भोलिका पुस्ताले के सिक्ने ? बलात्कार ? चोरी-डकैती ?, हत्याहिंसा?, गैरकानुनी काम? हो यिनै कुरालाइ ध्यानमा राखी हामिले हाम्रो ईतिहास कोर्नु पर्छ । नकारात्मक कुरालाई भन्दा सकारात्मक पक्षलाइ मात्र उजागर गर्ने गरौ । हामीले समाज र सिङ्गो देशको शान उच्चस्थानमा राख्नको लागि राम्रा र सकारात्मक काम र कुराले ईतिहास रचेर जान जरुरी छ ।
जय देश जय स्वाभिमान ।
यहाँहरुका लेख-रचना हामीलाई पठाउनुहोस